﻿	Ntụziaka Meatball dị mfe - Ezi Ntụziaka
ihe iji jee ozi na salad chicken ọkụ
-esi mee ka ube oyibo ranch salad mgbakwasa
ọdịiche dị n'etiti pizza sauce na marinara
ị nwere ike ifriizi ọkụkọ na osikapa ofe
Ntụziaka Meatball dị mfe
Nke a Ntụziaka Meatball dị mfe bụ ihe zuru oke dị na kichin ọ bụla! Ọ dị mfe ịkwadebe na anụ anụ ndị a na-apụta kemmiri ma jupụta na ekpomeekpo oge ọ bụla.
Enwere ike iji bọọlụ anụ ndị a mee ihe ọ bụla. Egwuregwu Swedish, greepu jelii meatballs , spaghetti na meatballs, ma ọ bụ ọbụna jiri dị ka ndị na-eri nri ma ọ bụ ndị na-eme nri!
Meatballs bu ihe eji esi nri, nke zuru oke na ofe, akpu ma obu sandwiches nke anu. M na-eme nnukwu ogbe meatballs ma friza ha, na-agbakwunye ha na ite ofe esi ma ọ bụ n'ime ite ite Marinara Sauce emepụta arụrụ n'ụlọ nri na nkeji!
A na-eji anụ ehi na anụ ezi mee anụ bọọlụ ndị a dị mfe maka ngwakọta nke ụtọ. Nwere ike iji anụ ọ bụla eji anụ ụlọ gụnyere anụ ehi, atụrụ ma ọ bụ soseji. Ọ bụrụ na anụ gị dị ezigbo nro (dị ka nke m Egwuregwu Turkey ) Mgbe ụfọdụ, m na-agbakwunye obere abụba dị ka tablespoon nke mmanụ oliv ma ọ bụ obere anụ ezi ezi.
Ntụziaka anụ a na-agbakwunye Oge Italian na obere cheese nke parmesan na-ekepụta ekpomeekpo anụ Italian. Ọ bụrụ na ị na-eji ha na uzommeputa ọzọ ị nwere ike ịgbanwe oge dị mfe ka ọ daba n’ihe ndị dị na nri gị.
Akwa na achịcha ahụ na-arụ ọrụ dị ka ihe na-ejikọ aka iji nyere bọọlụ anụ ahụ aka idobe ọdịdị ha.
Otu esi eme anu anumanu
Ihe omuma iji chekwaa ihe ndi ozo na ihe ndi ozo adighi agwakọta mgbe ị na-ejikọ ihe ndị ahụ. Mimebiga ihe ókè na-eme ka ha sie ike mgbe ị na-eme nri anụ a, jikọta ya ruo mgbe agwakọtara ya!
Gbaa mbọ hụ na bọọlụ anụ ahụ ha nhatanha ga-eme ka ha sie nri n'otu ọnụego. M na-eji kuki scoop ka ha ọbụna.
Ijide n’aka na anụ gị nwere ntakịrị abụba na-enyere aka mee ka ha dị nro. Ọ bụrụ na ị na-eji anụ ahụ mara abụba, enwere ike ịgbakwunye ụda oliv ma ọ bụ abụba.
Oge na Flavour:
Na ntụzi anụ a na-esi na Parmesan Chiiz na achịcha bred ndị Italia tinyekwuo oge na ekpomeekpo. Can nwere ike ịgbanwe oge ma ọ bụ ngwa nri dị iche iche dabere na ihe ị nwere n'aka ma ọ bụ otu ị ga-esi eri anụ anụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eme ụtọ na utoojoo efere anụ, ị nwere ike ịgbanwe oge nri Italian maka ginger na galik.
Ntụziaka anụ a na-eme ihe dị ka anụ iri asatọ na asatọ nke zuru oke maka nnọkọ. Ọ na-amasị m ịgbe ha nri tinye ha na friza n'ime akpa rọba. Enwere ike igbanye ha n’ọkụ n’ime ngwa ngwa ka anụ ya ọzọ!
Etu esi esi nri anụ
Meatballs nwere ike sie ọtụtụ ụzọ dị iche iche site na pan frying na idobe ha n'ime esi ofe ma ọ bụ ihendori ma ọ bụ sie ha na oven. Favoritezọ kachasị amasị m esi esi nri ha bụ ime bred na oven ebe ọ bụ na ọ naghị efesa, ọ nweghị ịkpụpụ anụ anụ na ha na-apụta zuru oke oge ọ bụla!
Etu esi eme Akwukwo Nri
Ọtụtụ bọọlụ anụ ga-enwe ntakịrị abụba nke mere ị ga-eji pan gị kpuchie pan gị mana ọ nwere ike ịhọrọ mana ọ na-eme ka ikuku dị ọcha. Kpochapu oven gị ma fesa pan gị (ma ọ bụ foil) na ịgba nri.
Ghichaa anụ ahụ ma tinye ha na pan ihe dị ka 1/2 ″ iche. Cheta na ị gbalịa idobe anụ anụ gị otu nha ka ha niile sie nri.
Ogologo oge ole iji sie anụ
Mgbe ị na-eme uzommeputa anụ a, mee ha na 400 Celsius F maka nkeji 18-20. Ana m agbaji otu mepee iji chọpụta maka agba ọ bụla na-acha pinki pinki. Temometa anụ eji etinye ya na anụ anụ kwesịrị ịgụ 165 Celsius.
Meatballs bụ ezigbo mgbaghara ma a bịa na okpomoku. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọzọ na oven na okpomọkụ dị iche, ịnwere ike ịgbakwunye ha ma lelee anụ ọkụ ọkụ.
Etu esi akpụkọta anụ
Ozugbo esiri ya ma mee ka ọ dị jụụ, bọọlụ anụ ndị a nwere ike ịjụ oyi maka nri ngwa ngwa na ụbọchị izu ọrụ! Naanị tinye ha na mpempe akwụkwọ mmiri ma kpuchie ruo awa ole na ole. Ozugbo oyi kpọnwụrụ, nyefee akpa rọba friza ma debe ha oyi kpọnwụrụ ruo ọnwa ole na ole.
More Ezi ntụziaka Meetball Re Ga-ahụ n'anya
Nri Lemọn Chicken Piccata Meatballs - Ọgụgụ ọkacha mmasị
Ihe ọ Luụ Luụ Lucy Meatballs
Akwụkwọ Cheddar Meatball - Party Appetizer Echiche!
Egwuregwu Meatballs Mac & Chiiz - Lmụaka hụrụ usoro nri a n'anya!
N'ụdị Spaghetti Casserole na Meatballs
4,93site naOgbe 150votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nriiri abụọ Nkeji Oge zuru ezu30 Nkeji Ọrụ12 servings Onye edemedeHolly Nilsson Ntụziaka meatball a dị mfe bụ m aga! Bọọlụ anụ ahụ na-apụta kemmiri oge ọ bụla ma nwee ọmarịcha agba mara mma. Bipute Ntụtụ
▢1 paụnd anụ ezi ala
▢½ iko Achịcha Italian
▢⅓ iko mmiri ara
▢¼ iko yabasị okpokoro
▢¼ iko pasili gbanwere
▢¼ iko parmesan shred
Na efere ọkara, gwakọta ihe niile ruo mgbe agwakọtara.
Mee ụdị ngwakọta n'ime anụ 48, ihe dị ka 1 ½ tablespoons ọ bụla.
Ime minit 18-20 ma ọ bụ rue mgbe esiri ya.
Na-eje ozi:4bọọlụ,Calorisị:Ogba 300,Carbohydrates:6g,Protein:26g,Abụba:17g,Abụba Ajuju:7g,Cholesterol:Ogbe 102mg,Sodium:Ogbe 301mg,Potassium:Ogbe 423mg,Sugar:1g,Vitamin A:Ogbe 280IU,Vitamin C:3.5mg,Calcium:136mg,Iron:Ugboro abụọmg
Isiokwuasian meatballs, meatball Ntụziaka N'ezieAgụụ, Isi Agụmakwụkwọ Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
Megharịa usoro a!